မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၆၀ဝ ကျော်(ဘီစီ ၅၈၈)တွင် စတင် ပွင့်ထွန်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာ သက်တမ်း သည် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ၏ သက်တမ်းနှင့် အတူတူဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားများအရ အတည်ပြု မှတ်သားနိုင်သည်။  ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ကို ထူထောင်ခဲ့သူ အနော်ရထာမင်း (ခရစ်၁၀၄၄ - ၁၀၇၈) လက်ထက်တွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင် ပြန့်နှံ့လာခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်း နန်းတက်စတွင် ပုဂံပြည်၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို လည်းကောင်း၊ လောကနာထကို လည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မာ၊ ဗိဿနိုး၊ ပရေမေသွာတို့ကိုလည်းကောင်း၊ နတ်နဂါးနှင့် အရည်းကြီးတို့ကိုလည်းကောင်း အားလုံးစုံကို ရောနှော ယောင်မှား၍ လည်းကောင်း ကိုးကွယ်နေကြလေသည်။ ထိုအခါ ယဉ်ကျေးမှုသည် မသန့်မရှင်း ဖြစ်နေလေသည်။
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ယှဉ်တွဲလျက်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပွဲတော်များ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အမြောက်အမြား ရှိနေသည်။ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဖြစ်သည့် သင်္ကြန် ကို ရေသဘင်ပွဲဟုလည်း သိကြပြီး ဟိန္ဒူဘာသာမှ အစပြုသည့် ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်သည် မြန်မာလူငယ်များအား ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ရှင်သာမဏေအဖြစ် သွတ်သွင်းကာ ရှင်ပြုမင်္ဂလာဆင်နွဲသည့် အချိန်လည်းဖြစ်သည်။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂိုဏ်းကြီးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ CIA World Factbook - Burma။6October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pranke, Patrick A (2013)၊ Myanmar၊ Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA. ISBN 0-02-865718-7
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 17 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Paw၊ Maung H.။ Preparation for A Place of Worship At Home။3January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schober၊ Juliane (2002)။ Sacred biography in the Buddhist traditions of South and Southeast Asia။ Motilal Banarsidass။ pp. 275–276။ ISBN 978-81-208-1812-5။
↑ MSN International Edition - World news, Africa news, Asia News, Europe News။ 26 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 September 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 17 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Monks are heroes in Burma[လင့်ခ်သေ] Tad Trueblood, The Spectrum & Daily News, South Utah, 10 July 2008
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_ဗုဒ္ဓဘာသာ&oldid=743761" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။